Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Cadaalad darrada Tallaalka ayaa caqabad ku noqon karta Soo -kabashada Cusub ee Caalamiga ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska
Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa ku baaqay in sinnaanta tallaalka adduunka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Mudane. Edmund Bartlett wuxuu hoosta ka xarriiqay in kordhinta helitaanka adduunka ee tallaallada COVID-19 ay fure u tahay dalxiiska ballaaran iyo dib-u-soo-nooleynta dhaqaalaha adduunka. Tani, maadaama uu ka xun yahay saamaynta taban ee sinnaan la'aanta tallaalka, oo uu sheegay inay caqabad ku noqon karto soo kabashada adduunka.
Tallaalka caalamiga ah ee loo siman yahay ma aha oo kaliya lama huraan ee wuxuu kaloo soo bandhigayaa dareen dhaqaale oo dheer.
Sinnaan la'aanta tallaalka ayaa sii socota iyada oo xitaa in ka badan 6 bilyan oo qiyaasood oo tallaal ah loo qaybiyey adduunka oo dhan, badidoodna ay ku jiraan waddamada dakhligoodu sarreeyo.
Wadamada ugu saboolsan wax ka yar 1% dadkooda ayaa tallaalay.
“Ma jiri doonto soo kabasho sal ballaadhan haddii aan la soo afjarin dhibaatada caafimaad. Helitaanka tallaalada waa furaha labada. Nasiib darrose, marxaladdan masiibada ah, sinnaan la'aanta tallaalku way sii jirtaa halka xitaa in ka badan 6 bilyan oo tallaal ah loo qaybiyey, badidoodna waxay ku jiraan waddamada dakhligoodu sarreeyo halka waddamada saboolka ahi ay haystaan ​​wax ka yar 1% dadkooda. Waxaan isku raacsanahay in tallaalka caalamiga ah ee loo siman yahay uusan ahayn mid lagama maarmaan u ah akhlaaqda laakiin sidoo kale la soo bandhigo dareenka dhaqaale ee muddada fog, ”Ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka ayaa hadalkan sheegay shalay (6-dii Oktoobar), intii lagu guda jiray bandhigga dalwaddu ee Ururka Dawladaha Mareykanka (OAS) Labaatan iyo Shanaad ee Golaha Wasiirrada ee Mareykanka iyo Masuuliyiinta Dalxiiska Heerka Sare. Waxay isu keentay mas'uuliyiinta ugu sarreeya dalxiiska, iyo sidoo kale wakiilo ka socda waaxda ganacsiga, tacliinta, iyo bulshada rayidka ah, si loo baaro istiraatiijiyado lagu yareynayo saameynta xun ee COVID-19 ee dalxiiska, iyo sidoo kale dalxiiska kadib COVID-19.
Intii lagu guda jiray hadalkiisa, wuxuu ku dhiirri -galiyay madaxda dalalka horumaray inay tallaallada la wadaagaan waddamada dakhligoodu hooseeyo, isagoo xusay in, isku -duwidda iyo iskaashiga caalamiga ahi ay fure u yihiin xaqiijinta barnaamij wax -ku -ool ah oo tallaal oo caalami ah.
“Marka la eego astaamaha masiibada, iyo COVID-19, gaar ahaan, ma jiri karto dalxiis caalami ah oo joogto ah oo waara oo waddammada dakhligoodu hooseeyo ay ku hadhaan. Kani waa aasaaska Agenda 2030 ee Horumar waara - waaba intaasoo aan illoobin. Arrintan, waxaan soo dhaweynaynaa oo aan uga mahadcelineynaa hadiyadaha tallaalka ee ay bixiyeen la -hawlgalayaasheena horumaray waxaanna ku adkeyneynaa in kuwani ay noqdaan hadiyado waqti ku habboon oo wax ku ool ah, iyadoo la tixgelinayo taariikhaha dhicitaanka tallaallada, ”ayuu yiri.
Intii lagu jiray kalfadhiga wasiirrada iyo mas'uuliyiinta sare ee dalxiiska ayaa fursad u helay inay is weydaarsadaan fikradaha iyo dib-u-eegista siyaasadda la xiriirta saameynta masiibada COVID-19 ku yeelatay waaxaha socdaalka iyo dalxiiska iyo inay aqoonsadaan aagagga la taaban karo ee iskaashiga ka dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah si kor loogu qaado dib-u-dhiskiisa iyo soo kabashada kadib masiibada.
Wasiir Bartlett ayaa hadda ah Guddoomiyaha Kooxda Shaqada ee OAS oo heer sare ah, kaas oo dejinaya qorshe hawleed, dib u soo kabashada warshadaha maraakiibta iyo kuwa duulimaadyada.
Kooxda shaqaysa waa mid ka mid ah afar, kuwaas oo lagu dhawaaqay intii lagu jiray kalfadhigii labaad ee gaarka ahaa ee Guddiga Dalxiiska ee Mareykanka ee OAS (CITUR) oo la qabtay 14-kii Ogosto, 2020, si loo fududeeyo soo-kabashada wax-ku-oolka ah iyo waqtiga leh ee qaybaha socdaalka iyo dalxiiska.